Dhurba Kumar Siwakoti – Mayorkhabar.com
Tag: Dhurba Kumar Siwakoti
बिर्तामोडका मेयर शिवाकोटीको आज : नागरिकलाई घरमै सामाग्री पुर्याउने निर्णय भएको दिन
Mayor Khabar १४ चैत्र २०७६ २०:०५	2 Comments BirtamodDhurba Kumar SiwakotiMayor
ईटहरी पूर्वको ‘हब’को रुपमा रहेको बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुव कुमार शिवाकोटी फरासिला मेयर हुन् । मनमा कुनै कुरा राख्दैनन्, लागेको कुरा फ्याट्टै भनिहाल्छन् । उस्तै पत्रकारका लागि त ठूलो मसला बन्न सक्छन्, मेयर शिवाकोटी । तर, नियत सफा राखेर लागेको कुरा स्पष्ट राख्ने मेयरका रुपमा चिनिएका उनै शिवकोटीको ‘आज’ कस्तो रह्यो त ? कोरोनाको त्रास बढिरहेका बेला मेयर खबरले राखेको चासोपछि मेयरको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ?
View More बिर्तामोडका मेयर शिवाकोटीको आज : नागरिकलाई घरमै सामाग्री पुर्याउने निर्णय भएको दिन